मोदीले सम्बोधन गरेको २४ घन्टा नबित्दै पाकिस्तानले गर्यो भारतमाथि यस्तो घोषणा, स्थिति भयावह हुन् सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह - Nepal Insider
Home/अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/मोदीले सम्बोधन गरेको २४ घन्टा नबित्दै पाकिस्तानले गर्यो भारतमाथि यस्तो घोषणा, स्थिति भयावह हुन् सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह
मोदीले सम्बोधन गरेको २४ घन्टा नबित्दै पाकिस्तानले गर्यो भारतमाथि यस्तो घोषणा, स्थिति भयावह हुन् सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह
एजेन्सी । भारतले जम्मू कश्मीरले पाएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने निर्णयपछि पाकिस्तानीले पनि कडा कदम चाल्ने संकेत देखाएको छ । तनाव बढ्दै गर्दा पाकिस्तानले दुई भारतीय कुटनीतिज्ञलाई निकाला गरिसकेको छ पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित भारतीय उच्चायुक्त (राजदूत) अजय बासरियालाइ उसले निकाला गरेको हो । यसअघि पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्धलाई घटाउने निर्णय गरेको थियो । पाकिस्तानले भारतका लागि आफ्ना नवनियुक्त राजदूतलाई पनि दिल्ली नपठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पाकिस्तानले आफ्ना सेनालाइ जुनसुकै परिस्थिति सामना गर्नेगरी तैनाथ रहन समेत निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षतामा बसेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समिति बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, सेना प्रमुख, खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले जम्मू–कश्मीरको विशेष हैसियत खोस्ने भारतको निर्णयविरुद्ध लड्ने बताइसकेका छन् । उनले उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‍मा समेत लैजाने र प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । यसअघि पाकिस्तान र भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९६५ र १९७१ मा पनि तोडिएको थियो । त्यतिवेला भारत–पाकिस्ताबीच युद्धको स्थिति थियो । पछिल्लो समयमा २००१ मा भारतीय संसदमा भएको आक्रमणपछि पनि दुवै देशका कुटनीतिक सम्बन्धमा तनाव यथावत छ । हिमाली क्षेत्र कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै केही भागमा दुबै देशले शासन गर्दै आएका छन् । जम्मु कश्मिरको तनावालाई लिएर दुई देशबीच युद्धको अवस्था देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
त्यस्तै जम्मू–कश्मीरमाथिको भारतीय कदमको पाकिस्तानमा चर्को विरोध भइरहेको छ । गत सोमबार भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मू कश्मीरले पाएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णय लगत्तै यस विषयमा आफ्नो रणनीति तय गर्न पाकिस्तानले संसदको संयुक्त सत्र बोलाएको थियो । बैठकमा विपक्षी सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री इमरानले भने, ‘तपाईहरु नै भन्नुस् कि हामीले कस्तो कदम उठाउनुपर्छ ? आखिर मैले कुनै कदम उठाएको छैन ।’ इमरानले अगाडि भने ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि भनेका छौं । हामीले इस्लामिक सहयोग संगठनसँग पनि कुरा गरेका छौं । कुन चीज छ जुन मैले गरेको छैन । हामी के भारतमाथि आक्रमण गरिदिउँ ?’ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरानले कश्मीरमा मध्यस्थता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव कार्यान्यन नगरे स्थिति अझै भयावह हुन सक्ने समेत बताएका छन् ।
यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मू कश्मीरबारे भारत सरकारले लिएको कदमलाई ऐतिहासिक फैसलाको संज्ञा दिएका छन् । जम्मू कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेपछि बिहीबार बेलुकी देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारत सरकारको कदम ऐतिहासिक भएको जनाएका हुन् । यसअघि जम्मू कश्मीरका नागरिकहरु अनेक अधिकारबाट बञ्चित रहेको र राज्यको विकासमा बाधा भएको भन्दै उनले सबै भारतीयको प्रयासले त्यो दूर भएको जनाए । सारा भारतलाई एकताबद्ध बनाउने सरदार बल्लभाई पटेल, बाबासाहब अम्बेडकर, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अटलीविहारी बाजपेयी र करोडौं देशवासीको सपना पूरा भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ । उनले जम्मू कश्मीर र लद्दाखमा नयाँ युग शुरु भएको समेत जनाए ।
सोमबार भारतले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ‘३७० र ३५ ए’ खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले देसवासीको नाममा सम्बोधन गरेका हुन् । भारतले जम्मू कश्मीरलाई जम्मू कश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा पुनर्गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । देसवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले अब सारा देशका नागरिकको हक र दायित्व समान भएको समेत उल्लेख गरे । उनले भने ‘यसका लागि लद्दाख र जम्मू कश्मीरका जनता र पूरा देशवाशीलाई हृदयपूर्वक धेरै-धेरै बधाई दिन चाहन्छु ।’ केही कुराहरु समयका साथै मनमा केही परिर्वतन नै हुन्न, यसरी नै चलिरहन्छ भन्ने स्थायी भाव आउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले धारा ३७० को साथ पनि यस्तै भएको बताए ।
यही धाराका कारण जम्मू कश्मीर र लद्दाखका जनतालाई भइरहेको हानीबारे यसअघि चर्चा नभएको मोदीको भनाइ छ । सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘कसैसँग कुरा गर्दा पनि धारा ३७० बाट जम्मू कश्मीरका जनताको जीवनमा के लाभ भयो भन्नेबारे चर्चा हुँदैनथ्यो ।’ धारा ‘३७० र ३५ ए’ले जम्मू कश्मीरलाई पृथकतावाद, आतंकवाद, परिवारवाद र ठूलो स्तरको भ्रष्टाचारबाहेक केही नदिएको प्रधानमन्त्री मोदीको टिप्पणी थियो । उनले भने, ‘यी दुई धारालाई देशका विरुद्ध केही मानिसहरुको भावना भड्काउनका लागि पाकिस्तानद्वारा हतियारका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । यसका कारण पछिल्लो तीन दशकसम्म करिब ४२ हजार निर्दोष मानिसहरु…यो आँकडाबाट आँशु आउँछ… ४२ हजार मानिसहरुको ज्यान गयो ।’ उनले यी धाराका कारण जम्मू कश्मीरको विकासमा गतिरोध भएको समेत जनाए ।
उनले सरकारको यो कदमबाट जम्मू कश्मीर र लद्दाखका मानिसहरुको वर्तमानका साथै भविष्य पनि सुमधुर हुने बताए । ‘हरेक सरकारले संसदबाट कानून बनाएर जनताको हितमा काम गर्छन् । यो निरन्तर चलिरहन्छ । कानून बनाउने बेला संसद् र संसदबाहिर सघन बहस हुन्छ । चिन्तन मनन हुन्छ । यसको आवश्यकता र प्रभावलाई लिएर छलफल हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट गुज्रेर बन्ने कानूनले देशका नागरिकलाई भलो गर्छ । तर संसद्ले यति ठूलो संख्यामा बनाउने कानून मुलुकको एक हिस्सामा लागू नै नहुने कुरा अकल्पनीय थियो ।’ मोदीले सम्बोधनका क्रममा भने । मोदीले धारा ‘३७० र ३५ ए’ बितेको इतिहास भएको भन्दै त्यसका नकारात्मक प्रभावबाट पनि मुक्ति मिल्ने बताए ।
उनले अब राज्यमा रोजगारीका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने भन्दै राज्यका सबै रिक्त स्थानमा कर्मचारी भर्ना गराइने तथा निजी र सरकारी रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । सेना र अर्धसैनिक बलको भर्तीका लागि स्थानीयलाई पहल गरिने मोदीको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री स्कलरशिप योजनाको विस्तार गरिनेछ । ज्यादा भन्दा ज्यादा विद्यार्थीलाई लाभ मिलोस् ।’ केन्द्र सरकारले ३७० हटाउने बेला केही समयका लागि मात्रै सीधै केन्द्र सरकारको शासनमा राख्ने निर्णय धेरै सोचेर लिएको बताउँदै मोदीले त्यहाँ गर्भनर शासन लागू भएयता त्यहाँको प्रशासन सीधै केन्द्र सरकारको माताहतमा रहेको र त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिन थालेको बताए । उनले नयाँ व्यवस्था अनुसार जम्मू कश्मीरलाई आतंकवाद र पृथकतावादबाट मुक्त गर्ने समेत दृढता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘धर्तीको स्वर्गको रुपमा रहेको जम्मू कश्मीर पुनः एकपटक विकासको नयाँ उचाईमा पुग्नेछ । विश्व आकर्षित हुनेछ । नागरिकहरुको जीवस्तर बढ्नेछ ।’ उनले कुनै समय बलिउडका चलचित्रहरु कश्मीरमा शुटिङ हुनेगरेको प्रसंग निकाल्दै त्यहाँ स्थीरता पैदा भएको खण्डमा भारतको मात्र नभएर विश्वभरबाट मानिसहरु आउने आशा व्यक्त गरे । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि आफूले तेलगु, हिन्दी र तामिल चलचित्र उद्योगहरुलाई त्यहाँ लगानी गर्न आग्रह गर्ने समेत आश्वासन दिए । केही मानिसहरु सरकारको यो निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारले यसबारे जारी बहसको जवाफ दिइरहेको जनाए । तर उनले यो बसका क्रममा देशहितलाई सर्वोपरी मान्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नयाँ दिशा दिन सरकरलाई मद्दत गरौं । देशको भावनाको सम्मान गरौं ।
अन्ततः काश्मिर बिषयलाई लिएर झनै ठुलो तनाव बढ्दै, लद्दाख सीमामा पाकिस्तानले तैनाथ गर्यो आफ्नो लडाकु विमान
हजारौ गोर्खा रहेको ठाउँ जम्मू-कश्मीरबाट बाहिरियो डरलाग्दो खबर : मूलधारका नेता नजरबन्दमा, बिग्रियो माहोल, इन्टरनेट, टेलिफोन पनि बन्द गरियो
सिरियामा फेरी भयो अहिलेसम्मकै ठुलोआक्रमण, १६७ जना सर्वसाधारण मारिए (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)